इन्छनमा पिसाब फेरिरहेको मूर्तिहरु हटाउन माग – Eps Sathi
इन्छनमा पिसाब फेरिरहेको मूर्तिहरु हटाउन माग
June 19, 2021 937
दक्षिण कोरियाको इन्छन शहरस्थित सोङ्दोमा रहेको पार्कमा रहेका मूर्तिहरु वि’वादमा आएका छन। पार्कमा रहेको पोखरीतर्फ पि’साब फेरिरहेका तिनवटा पुरुषको मूर्तिहरु हटाउन माग गर्दै नि’वेदन परेको छ। इन्छनका बासिन्दा तथा त्यहाँ घुम्न आउने पर्यटकहरुले यस्तो मूर्ति सार्वजनिक स्थानमा राख्न उचित नहुने धारणा राखेका छन।
इन्छन फ्री इकोनोमिक जोन अधिकारीका अनुसार शुक्रबार मात्रै पार्कमा रहेका ति मूर्तिहरु हटाउनका लागि नि’वेदन परेका छन। ति मूर्तिहरुमा पानीको फोहोरा जडान गरिएको छ। मूर्तिबाट पि’साब फेरेजसरी पानी पार्कमा रहेको पोखरीमा खस्दछ। यी मूर्तिहरु सन २०११ मा कलाकार किम योङ्ग गुलले बनाएका थिए। मूर्तिहरुले तिनजना फुच्चाफुच्चीहरुले पाईन्ट तल खो’लेर पि’साब फेरेजस्तो देखिन्छ।
कलाकार किम योङ्ग गुलले आफ्नो बाल्यकालको सम्झनालाई मूर्तिमा उतारेका हुन। बच्चा बेलामा आफूहरु सोङ्दोको हिलोमा घुँगी खोज्न जाँदा पि’साब फेर्न शौचालय नहुँदा त्यहिँ त्यसरी नै पि’साब फेर्ने गरेको सम्झनालाई उनले उतारेका हुन।
पार्कमा रहेका ति मूर्तिहरु हटाउन भनि नि’वेदन दिनेहरुले यस्ता मुर्ति सार्वजनिक स्थानमा राख्दा शोभनिय नहुने तथा हेर्ने देख्नेहरुलाई पनि ला’ज हुने गरेको बताएका छन। गत महिना पनि सोङ्दोमा रहेको अनलाईन कम्युनिटीले पनि क’म्प्लेन लेखेको थियो। त्यस क्षेत्रका एक वासिन्दाले आफ्नो सानो छोरा पार्कमा जाँदा उक्त मूर्तिहरु देखि नरा’म्रो महसुस गरेको भन्दै नि’वेदन द’र्ता गराएका छन। १० बर्ष अघि र अहिलेको अवस्था र चेतना स्तर धेरै परिवर्तन भईसकेकाले अहिले त्यस्ता मूर्तिहरु आवश्यक नपर्ने धेरैको बुझाई रहेको छन।
Prevबजारमा ५ मानवन दरका नोटहरु सर्टेज, आखिर कहाँ गए त यि नोटहरु?
Nextकोरियाको ‘काकाओ’ पाँचौ ठूलो कम्पनी बन्न सफल
कोरियाको प्रसिध्द हान नदीमाथि यसरी बनेको थियो बिशाल पुल
कठै! दुबै खुट्टा छैनन्, यति मीठो दोहोरि गाउछिन् (हेरौं भिडियो)